Costa Azahar -Uluntu lwaseValencian - eSpain
Iibhayenvenidos a Costa Azahar
La Costa Azahar Kukunxweme lwaseSpain loLwandle lweMeditera, ebekwe kwiPhondo laseCastellón, elenziwe malunga ne-120 km yeelwandle kunye neecves.
Igama lalo livela kwintyatyambo eorenji, intyatyambo eorenji kunye nesityalo esikwiphondo esineziqhamo.
Iidolophu ezikwiCosta del Azahar (ukusuka emantla ukuya emazantsi) zezi: Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de Chivert, Torreblanca, Cabanes coast, Oropesa del Mar, Benicasim, Castellón de la Plana, Almazora, Burriana, Nules, Moncófar , IiChilches, iLa Llosa kunye neAlmenara.
Amagqabantshintshi alo ngokugqwesa ziidolophu zaseBenicasim nasePeñíscola, kuba aba masipala ngabona bajolise kakhulu kubakhenkethi eluntwini.
Kukwakhona ukhenketho olubanzi lomnyhadala kunxweme lwaseCastellón, kunye nezibonelelo zomculo ezinje ngeArenal Sound Festival (iBurriana), eBenicássim i-Benicasim International Festival, umnyhadala weRototom kunye neSanSan phakathi kwabanye. Umnyhadala woMculo we-Electrosplash elunxwemeni lwaseFora-Forat de Vinaroz.
Unxweme lubandakanya iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ngaselwandle iVinaroz, iBenicarló, iPeñíscola, i-Oropesa del Mar, iBenicasim neMoncófar, kodwa neSierra de Irta, intaba enxuse ulwandle.
Sinokukhankanya imigxobhozo yePrat Cabanes-Torreblanca Natural Park, iDeserto de las Palmas, kunye neColumbretes Islands yolondolozo lwendalo olungama-56 km ukusuka elunxwemeni. Okokugqibela, asinakulibala ikomkhulu lephondo: iCastellón de la Plana kunye nedolophu enqatyisiweyo yaseMascarell.
ICosta del Azahar yakhiwe zii-A-7 kunye ne-AP-7 iimoto ezidibanisa bonke oomasipala abaphambili kwaye bazidibanise neValencia emazantsi kunye neTarragona emantla. I-N-340 ikwagudla unxweme olufanayo.
Ukusuka ngaphakathi kufikeleleka ngokulula yi-A-3 evela eMadrid kunye ne-A-23 evela eTeruel naseZaragoza.
Ngomoya, unxweme lunikezelwa yiSikhululo senqwelomoya saseCastellón.
- Marina d 'Okanye
Iphuhliswe ngu IbizaCreate